AMỤMA NZUZO - BancaNEO
Nabata na amụma nzuzo nke www.bancaneo.org nke MY NEO GROUP TRUST nwe ma na-arụkwa ya.
Amụma nzuzo a nwere nkọwa gbasara mkpokọta, ojiji na igosipụta data nkeonwe gị. Ọ bụrụ na ozi ahụ kpuchiri naanị otu ọrụ anyị, anyị ga-egosi gị nke a n'ụzọ doro anya. Iji gosi nkwanye ugwu maka ikike nzuzo gị n'otu n'otu, MY NEO GROUP TRUST na-ahazi data nkeonwe anakọtara dịka iwu gbasara nchekwa data nkeonwe nke Republic of Italy, Iwu nchekwa data zuru oke na iwu ndị ọzọ dị ka Ntuziaka No. 95/46/EC nke European Parliament. Ndị ọrụ, ndị nnọchi anya, na ndị ọzọ nwere ohere ịnweta data nkeonwe gị na-agba mbọ hụ na nchekwa ya ọbụlagodi na njedebe nke mmekọrịta nkwekọrịta.
Biko gụọ amụma nzuzo a nke ọma ka ọ dị mgbe ị na-eji Ọrụ anyị ma ọ bụ gaa na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ jiri ngwa anyị. Anyị na-eji nzuzo na nchebe nke data akpọrọ ihe ma na-agba mbọ ijikwa ozi nkeonwe nke ndị anyị na ha na-emekọrịta ihe, ma ndị ahịa, ndị na-ebubata ya ma ọ bụ ndị ọrụ ibe anyị, n'ụzọ kwesịrị ekwesị yana n'ụzọ ga-agbaso iwu iwu nke mba anyị na-arụ ọrụ.
MY NEO GROUP TRUST ("Bancaneo”,“ Anyị ”,“ anyị ”,“ nke anyị ”) bụ maka nchikọta, ojiji na ikpughe ozi nkeonwe gị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara otu anyị si echebe ma ọ bụ jiri data gị, biko zitere anyị ozi na [email protected].
Ozi Nkeonwe Nke A Pụrụ Collechịkọta
Anyị ga-anakọta data ndị a gbasara gị:
Ozi ị nyere anyị:
Nwere ike ịnye anyị ozi, gụnyere ozi nkeonwe, gbasara onwe gị mgbe ị debanyere aha iji Ọrụ anyị, dịka aha gị na adreesị ozi-e. Nke a gụnyekwara ozi ị nyere site na ịga n'ihu na-eji Ọrụ anyị, na-ekere òkè na mbadamba mkparịta ụka ma ọ bụ ọrụ mgbasa ozi ndị ọzọ na weebụsaịtị ma ọ bụ App anyị, tinye asọmpi, nkwalite ma ọ bụ nyocha, na mgbe ị kọọrọ nsogbu na Ọrụ anyị. Ihe ọmụma ị nyere anyị nwere ike ịgụnye aha gị, adreesị gị, adreesị ozi-e, akara ekwentị, ozi gbasara ego (gụnyere kaadị akwụmụgwọ, kaadị debit, ma ọ bụ ozi akaụntụ ụlọ akụ), ihe kpatara ịkwụ ụgwọ, ọnọdụ obodo, nọmba nchekwa ọha, nkọwa onwe onye na foto .
Anyị nwekwara ike ịchọ ozi azụmaahịa na / ma ọ bụ njirimara njirimara sitere na ịmaatụ gị, ọ bụrụ na ị ziga ma ọ bụ nata ụfọdụ azụmaahịa dị oke ọnụ ahịa ma ọ bụ nke dị elu ma ọ bụ dịka achọrọ iji rube isi na ọrụ mgbochi mgbochi ego anyị n'okpuru iwu dị.
N'inye data nkeonwe nke onye ọ bụla (na-abụghị onwe gị) na ihe atụ nwere ike ịnata ego n'aka anyị dị ka akụkụ nke iji Ọrụ anyị, ị na-ekwe nkwa na ị nwetara nkwenye n'aka onye dị otú ahụ iji gosi anyị data nkeonwe ya, yana nkwenye ya na nchịkọta anyị, iji ya na igosipụta nke data onwe onye a, maka ebumnuche akọwapụtara na Nzuzo Nzuzo a.
Ozi anyị na-anakọta banyere gị. Maka ojiji gị nke Ọrụ anyị, anyị nwere ike ịnakọta ozi ndị a na-akpaghị aka, ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịbụ ma ọ bụ tinye ozi nkeonwe:
nkọwa nke azụmahịa ị na-eme mgbe ị na-eji Ọrụ anyị, gụnyere ọnọdụ ala ebe azụmahịa ahụ sitere;
ozi teknụzụ, gụnyere internet protocol (IP) adreesị iji jikọọ kọmputa gị na ,ntanetị, ozi nbanye gị, ụdị ihe nchọgharị na nsụgharị, ntọala mpaghara oge, ụdị nkwụnye ihe nchọgharị na ụdị, sistemụ arụmọrụ na ikpo okwu;
ozi gbasara ọbịbịa gị, gụnyere ndị zuru ezu Ọnọdụ Ndị Na-ahụ Maka Ọnọdụ (URL) pịa na, site na site na weebụsaịtị ma ọ bụ App anyị (gụnyere ụbọchị na oge); ngwaahịa ndị ị hụrụ ma ọ bụ chọọ; oge mmeghachi omume na peeji nke, budata njehie, ogologo oge nleta na ibe ụfọdụ, ozi mmekọrịta peeji (dị ka ịpịgharị, pịa, na oke-elu), na usoro eji agagharị na ibe ahụ na nọmba ekwentị ọ bụla a na-akpọ iji kwado nọmba ndị ahịa anyị. .
Ozi anyị na-enweta site na isi mmalite ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịnweta ozi gbasara gị ma ọ bụrụ na ị na-eji nke ọ bụla ọzọ weebụsaịtị anyị na-arụ ọrụ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ anyị na-enye. Anyị na ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ nke ọma wee nwee ike ịnweta ozi gbasara gị n'aka ha.
ụlọ akụ ị na-eji nyefee anyị ego ga-enye anyị ozi nkeonwe gị, dị ka aha na adreesị gị, yana ozi ego gị dịka nkọwa ụlọ akụ gị;
ndị mmekọ azụmahịa nwere ike inye anyị aha na adreesị gị, yana ozi ego, dị ka ozi ịkwụ ụgwọ kaadị;
netwọọdụ mgbasa ozi, ndị na-eweta nchịkọta na ndị na-enye ihe ọmụma nwere ike ịnye anyị ozi ezighi ezi banyere gị, dị ka ikwenye otu ị si chọta weebụsaịtị anyị;
Ndị na-ahụ maka kredit anaghị enye anyị ozi nkeonwe ọ bụla gbasara onwe gị mana enwere ike iji ya iji kwado ozi ị nyere anyị.
Ozi sitere na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta. Ọ bụrụ na iji akaụntụ mgbasa ozi gị (dịka ọmụmaatụ, Facebook ma ọ bụ Google) banye Ọrụ anyị, anyị ga-enweta ozi dị mkpa nke dị mkpa iji mee ka Ọrụ anyị ma nyochaa gị. Netwọk mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ga-enye anyị ohere ịnweta ụfọdụ ozi ị nyere ha, gụnyere aha gị, onyonyo profaịlụ na adreesị ozi-e. Anyị na-eji ozi dị otú ahụ, yana ozi ọ bụla ọzọ ị nyere anyị ozugbo ịdenye aha ma ọ bụ jiri Ọrụ anyị, iji mepụta akaụntụ gị ma kpọtụrụ gị gbasara ozi, ngwaahịa na ọrụ ị chọrọ n'aka anyị. I nwekwara ike ịrịọ ka anyị nwee ike ịnweta kọntaktị na akaụntụ mgbasa ozi gị ka ị wee nwee ike izipu njikọ ezigara ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị. Anyị ga-eji, gosipụta ma chekwaa ozi niile a dịka amụma nzuzo a.
Ngwaahịa na ọrụ anyị na-eche na ndị okenye 18 afọ na karịa na-abụghị maka ụmụaka. Anyị anaghị akpachara anya na-anakọta ozi site na ọgbọ a. Akụkụ nke usoro nyocha na-egbochi Bancaneo na-anakọta data dị otú ahụ. Ọ bụrụ na anakọtara ozi sitere n'aka nwatakịrị na-enweghị nkwenye nke nkwenye ndị nne na nna, a ga-ehichapụ ya.
Kedu ka anyị si echebe ozi gị
Anyị na-eji sava echekwara iji chekwaa ozi nkeonwe gị. Ozi niile ị nyere anyị na-echekwa na sava anyị echedoro.
Dịka ị ga-ama, nnyefe ozi site na ịntanetị enweghị nchekwa zuru oke. Ọ bụ ezie na anyị ga-eme ike anyị niile iji kpuchido ozi nkeonwe gị, anyị enweghị ike ịkwado nchebe nke ozi gị n'oge nnyefe, yana nnyefe ọ bụla dị n'ihe ize ndụ gị. Ozugbo anyị natara ozi gị, anyị ga-eji usoro siri ike na ihe nchekwa iji gbalịa igbochi nnweta na-enwetaghị ikike.
Anyị na-azụ ma na-azụ ndị ọrụ anyị gbasara mkpa ọ dị nzuzo na nzuzo nke ozi nkeonwe nke ndị ahịa. Anyị na-echekwa usoro anụ ahụ, nke elektrọnik na usoro nke na-agbaso iwu na usoro dị mkpa iji kpuchido ozi nkeonwe gị.
Jiri nke ozi
Anyị na-eji ozi gị na ụzọ ndị a:
ịrụzu ọrụ anyị metụtara nkwekọrịta gị na anyị yana inye gị ozi, ngwaahịa na ọrụ ahụ;
iji rube isi n'iwu na / ma obu iwu obula kwesiri ekwesi tinyere iwu di na mpụga obodo obibi gi ma ọ bụ isoro usoro iwu ọ bụla;
iji gwa gị gbasara mgbanwe na Ọrụ anyị;
ịhazi Ọrụ anyị na ozi anyị nyere gị, na iji dozie mkpa gị - dị ka obodo adreesị gị na akụkọ azụmahịa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eziga ego site n'otu ego gaa na nke ọzọ, anyị nwere ike iji ozi a gwa gị mmelite ngwaahịa ma ọ bụ atụmatụ ọhụụ nwere ike ịbara gị uru;
dịka akụkụ nke mbọ anyị na-echekwa Ọrụ anyị na nchekwa;
iji nye Ọrụ anyị yana maka arụmọrụ n'ime, gụnyere nchọpụta nsogbu, nyocha data, nyocha, nyocha, ọnụọgụ na ebumnuche nyocha;
iji melite Ọrụ anyị na iji hụ na e gosipụtara ha n'ụzọ kachasị dị irè;
iji tụọ ma ọ bụ ghọta ịdị irè nke mgbasa ozi anyị na-ejere ma nyefee gị mgbasa ozi dị mkpa;
iji nye gị ohere isonye na atụmatụ mmekọrịta nke Ọrụ anyị, mgbe ịhọrọ ịme nke ahụ;
iji nye anyị ohere ịchụso usoro ọgwụgwọ dịnụ ma ọ bụ ịbelata mmebi nke anyị nwere ike ịkwagide yana ịmanye usoro na ọnọdụ anyị
ka anyị nwee ike ịnye gị ozi gbasara mbọ anyị na-agba ịkwalite amụma maka ọhaneze.
iji nye gị ozi gbasara ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ yiri nke anyị na-enye;
iji nye gị, ma ọ bụ nye ndị ọzọ ahọpụtara ịhọrọ ka ha nye gị, ozi gbasara ngwongwo ma ọ bụ ọrụ anyị chere nwere ike ịmasị gị; ma ọ bụ
ikpokọta ozi anyị na-enweta site na isi mmalite ndị ọzọ yana ozi ị nyere anyị yana ozi anyị nakọtara gbasara gị. Anyị nwere ike iji ozi a yana ozi jikọtara ọnụ maka ebumnuche ndị edepụtara n'elu (dabere n'ụdị ozi anyị natara).
Ngosipụta nke ozi gị
Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi gị na ndị ọzọ ahọpụtara gụnyere:
ndị mmekọ, ndị mmekọ azụmaahịa, ndị na-ebubata ya na ndị na-arụ ọrụ maka arụmọrụ na ogbugba nke nkwekọrịta ọ bụla anyị na ha ma ọ bụ gị;
ndị mgbasa ozi na netwọkụ mgbasa ozi naanị ịhọrọ na ijere mgbasa ozi dị mkpa nye gị na ndị ọzọ;
nchịkọta na ndị na-enye injin nchọta ihe na-enyere anyị aka na mmelite na njigide nke saịtị anyị; na
ndị otu anyị ma ọ bụ ndị enyemaka anyị
Anyị nwere ike igosipụta ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ:
ọ bụrụ na anyị ere ma ọ bụ zụta azụmaahịa ọ bụla ma ọ bụ akụ ọ bụla, ọ bụrụ na anyị nwere ike igosipụta data nkeonwe gị n'aka onye na-achọ ire ma ọ bụ azụ ahịa ma ọ bụ akụ dị otú ahụ;
ọ bụrụ na anyị nọ n'okpuru ọrụ igosipụta ma ọ bụ ịkekọrịta data nkeonwe gị iji rube isi na iwu ọ bụla. Nke a gụnyere ịgbanyere ozi na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ maka ebumnuche nke nchedo aghụghọ na mbelata ihe ize ndụ otuto;
iji nyere anyị aka na-eduzi ma ọ bụ na-arụkọ ọrụ na nyocha nke wayo ma ọ bụ ọrụ iwu na-akwadoghị ebe anyị kwenyere na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ma daba adaba ime ya;
iji gbochie ma chọpụta aghụghọ ma ọ bụ mpụ;
na nzaghachi maka akwụkwọ ịkpọ òkù, akwụkwọ ikike, usoro ụlọ ikpe, ma ọ bụ dị ka ndị ọzọ Bancaneo iwu chọrọ;
iji chọpụta ihe ize ndụ nke ego na mkpuchi, na ịchekwa ọrụ anyị na nke ndị ọ bụla na ndị mmekọ anyị;
iji nye anyị ohere ịchụso ọgwụgwọ ndị dịnụ ma ọ bụ belata mmebi nke anyị nwere ike ịkwagide
iji nwetaghachi ụgwọ ma ọ bụ n'ihe metụtara enweghị ego gị; na
ịzụlite mmekọrịta ndị ahịa, ọrụ na usoro.
Anyị enweghị ndepụta edepụtara nke ndị ọzọ niile anyị na ha na-ekerịta data gị, n'ihi na nke a ga-adabere kpamkpam na ojiji nke Ọrụ anyị. Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere onye anyị kesara data gị na, ma ọ bụ iji nye gị ndepụta akọwapụtara gị nke ọma, ịnwere ike ịrịọ nke a site na ịdegara [email protected].
Kekọrịta na ịchekwa data nkeonwe gị
Enwere ike ịbuga data anyị nakọtara n'aka gị, ma chekwaa na, ebe njedebe United States. O nwekwara ike iji ndị ọrụ na-arụ ọrụ na mpụga US ndị na-arụrụ anyị ọrụ ma ọ bụ maka otu n'ime ndị na-eweta anyị. Ndị ọrụ dị otu a nwere ike itinye aka na ihe ndị ọzọ, mmezu nke usoro ịkwụ ụgwọ gị, ịhazi nkọwa ịkwụ ụgwọ gị yana inye nkwado ọrụ. Site na ịnye ozi nkeonwe gị, ị kwenyere na nnyefe a, ịchekwa ma ọ bụ nhazi. Anyị ga-ewere usoro niile dị mkpa iji hụ na edobere data gị yana echedoro yana Usoro Nzuzo a.
Anyị na-eji obere faịlụ (ndị a maara dị ka kuki) ịmata ọdịiche dị n'etiti gị na ndị ọrụ ndị ọzọ, lee otu ị si eji saịtị na ngwaahịa anyị ebe ị na-enye gị ahụmịhe kachasị mma. Ọ na-emekwa ka anyị nwee ike ịkwalite ọrụ anyị, maka ozi zuru ezu banyere kuki na teknụzụ ndị ọzọ anyị ji eme ihe na ebumnuche anyị ji eme ha. kuki Policy.
Njide nke ozi gị
Dịka ụlọ ọrụ na-achịkwa ego, Bancaneo Iwu chọrọ ka ịchekwa ụfọdụ data nkeonwe gị na azụmahịa gị karịa imechi akaụntụ gị na anyị, lee ikike gị n'okpuru. A na-enweta data gị naanị n'ime mkpa ịmara ndabere, ọ ga-enweta ma ọ bụ hazie ya ma ọ bụrụ na ọ dị oke mkpa.
Anyị ga-ehichapụ data mgbe iwu na-adịghị mkpa ma ọ bụ ikike nke anyị na-arụ ọrụ na ya.
Ikike Nchedo Data N'okpuru GDPR
Bancaneo na-agba mbọ iji hụ na nhazi na usoro nhazi. Ọ bụ ya mere o ji dị anyị mkpa na ndị data nwere ike ọ bụghị naanị igosipụta ikike ha ịjụ kamakwa ikike ndị na-esonụ ebe iwu dị iche iche chọrọ juru:
Ikike ịmara ihe, Art. 15 nke GDPR
Ikike mgbazi, Art. 16 nke GDPR
Ikike nhichapụ ("Ikike echefuru ya"), Art. 17 nke GDPR
Ikike igbochi nhazi, Art. 18 nke GDPR
Ikike ịnyefe data, Art. 20 nke GDPR
Ikike ịjụ, Art. 21 nke GDPR
Iji gosi ikike gị, biko kpọtụrụ anyị dịka egosiri na ngalaba "Kpọtụrụ Anyị" n'okpuru.
Iji nwee ike ịhazi arịrịọ gị, yana maka ebumnuche njirimara, biko mara na anyị ga-eji ozi nkeonwe gị dabere na Art. 6 para. 1 (c) nke GDPR.
I nwekwara ikike itinye akwụkwọ mkpesa na onye nlekọta nlekọta dịka Art. 77 GDPR na Nchikota 19 GDPR.
Ikike metụtara California
Amụma Nzuzo Ndị Azụmaahịa California
Na ọkwa a, anyị na-ekwu maka nkwupụta ngosi dị n'okpuru Iwu Nzuzo Ndị Azụmaahịa California (CCPA) maka ndị bi na California. Ekwesịrị ịgụ ọkwa a yana Nkwupụta Nzuzo anyị ma metụtara ndị bi na California niile na-eleta weebụsaịtị anyị ma ọ bụ jiri Ọrụ anyị.
Nchịkọta data nkeonwe na nzube nke iji: Anyị na-anakọta, jiri ma kesaa data nkeonwe nke ndị bi na California dị ka akọwara n'elu.
Iwu nzuzo nzuzo nke ndị ahịa California
Ugbu a ị marala otu anyị si anakọta, jiri ma kesaa ozi nkeonwe gị, CCPA na-enye ndị bi na California ikike ụfọdụ gbasara ozi nkeonwe ha. Akụkụ a na-akọwa ikike CCPA gị ma kọwaa otu esi eji ikike ndị ahụ. Na mgbakwunye, iwu California Shine the Light (CA Civ. Code § 1798.83) chọrọ ka anyị nye ndị bi na California, mgbe ha rịọrọ, aha na adreesị nke ndị ọzọ natara ozi nkeonwe na ngalaba nke ozi nkeonwe kerịta.
Ndị bi na California nwere ikike ịrịọ ka MM BITINVEST OU gosipụta ozi nkeonwe Bancaneo achịkọtala, jiri, gosipụta, ma ree ya n’ime ọnwa iri na abụọ gara aga. Ozugbo anyị natara ma gosipụta arịrịọ ndị ahịa gị gosipụtara, anyị ga-ekpughere gị ozi ndị dị mkpa na usoro a na-ebugharị ma dịkwa mfe ịnweta, na-adịkarị n'ime ụbọchị 12 nke arịrịọ. Nwere ike ịme arịrịọ ndị ahịa a na-enweta maka ịnweta ma ọ bụ nweta data ugboro abụọ n'ime oge ọnwa 45.
Mgbe ị na-enye ozi n'okpuru ikike ịma, anyị ga-agụnye:
Mpempe nke ozi nkeonwe azụmaahịa na-anakọta banyere ndị na-azụ ahịa ma gosipụta ma ọ bụ ree ya maka ebumnuche azụmahịa
Udi nke uzo ihe omuma nke ndi ahia
Azụmaahịa ma ọ bụ nzube azụmahịa maka ịnakọta na ire ozi nke onye na-eri
Mpaghara nke ndi ozo nke ndi ahia ha kesara ihe omuma nke onye ahia ha ma obu ndi erere ozi nkeonwe
Akụkụ ụfọdụ nke ozi nkeonwe anakọtara banyere ndị ahịa
Ndị bi na California nwekwara ikike ịrịọ nhichapụ nke data nkeonwe ha, dabere na ụfọdụ ndị ọzọ, enweghị ike ịkpa oke ma ọ bụ ịkpa oke maka na ha na-egosipụta ikike ha n'okpuru Iwu Nzuzo Ndị Ahịa California. Anyị nwere ike ịchọ ka ị nyekwuo data nkeonwe iji nyochaa njirimara gị tupu anyị ebido arịrịọ gị; anyị nwere ike ghara ịhazi arịrịọ gị ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịchọpụta njirimara gị.
Ndị bi na California nwekwara ikike ịpụ na ọrịre nke ozi nkeonwe. N'ime ọnwa iri na abụọ gara aga (12) Bancaneo erebeghi ozi nkeonwe.
Ọ bụrụ na ị bụ onye bi na California ma chọọ ịrịọ arịrịọ, biko nyefee arịrịọ gị, na ide, iji: [email protected].
I nwekwara ike iji usoro ndị a nyefee ajụjụ gị ma ọ bụ gosipụta nchegbu gị BancaneoNzuzo na omume.
Ọrụ anyị nwere ike, site n'oge ruo n'oge, nwee njikọ na weebụsaịtị nke netwọkụ anyị na ndị mmekọ, ndị mgbasa ozi na ndị mmekọ. Ọ bụrụ na ịgbaso njikọ nke weebụsaịtị ndị a, biko mara na weebụsaịtị ndị a nwere amụma nzuzo nke ha yana na anyị anaghị anabata ọrụ ọ bụla maka ha. Biko lelee atumatu ndị a tupu ị nyefee data nkeonwe na weebụsaịtị ndị a.
Mgbanwe na iwu nzuzo anyị
Iji soro usoro kachasị mma, iwu ọhụrụ, na mgbanwe etu anyị si anakọta ma jiri ozi nkeonwe, anyị nwere ike gbanwee Nzuzo Nzuzo a site n'oge ruo n'oge. Ọ bụrụ na anyị emee mgbanwe na Nzuzo Nzuzo a, anyị ga-ezigharị Nzuzo Nzuzo ahụ na weebụsaịtị ma melite ụbọchị "emelitere ikpeazụ". Iji mee ka ọ dị ọhụrụ ngbanwe ọ bụla, biko jikwaa oge ụfọdụ. Ojiji nke ọrụ anyị na-eso mgbanwe ndị a pụtara na ị nabatara Iwu Nzuzo ahụ e degharịrị. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ inyocha ụdị nke Iwu Nzuzo ahụ nke rụpụtara ngwa ngwa tupu nyochagharị a, biko kpọtụrụ anyị na [email protected].
Ajuju, nkwanye na arịrịọ gbasara Iwu Nzuzo a nabatara ma kwesiri ilebara ndị otu nzuzo nzuzo anyị anya na adreesị ozi-e na - [email protected].